Fanambarana | SEFAFI
Mba hiverenana amin’ny lamina araka ny lalàmpanorenana, mitantana ny raharaha andavanandro ary manomana ny fifidianana
Rehefa tafatsangana ny Governemanta sy ny Antenimieran’ny Tetezamita, dia ny fanatontosana ny fifidianana ankatoavin’ny rehetra sisa no dingana farany hiverenana amin’ny fitondram-panjakana miorina ara-dalàna efa nandrasana nandritra ny telo taona. Tsy horesahina intsony ny fomba nananganana ny Governemanta, sy ny fepetra amin’ny fanorenana ny Antenimieran’ny Tetezamita ; mbola ireny indray no porofo mivaingana fa ny voninahitra sy ny vola ary ny fahefana ho an’ny fahefa...
Hamaky ny tohiny…
Aorian’ny « tondro zotra » dia inona ?
Nisy tondro zotra iray vita sonia ihany taorian’ny toe-javatra maro be nifamahofaho : ny tantara no aoka hitsara. Fa mandrakizao aloha dia mbola ny savoritaka no manjaka. Mbola tsy maina akory ny ranomainty nanaovana ny sonia dia indreo fa efa mifanandrina sahady ny hevitra tsy mifanaraka enti-mandray ilay tondro zotra. Ary ny loza dia izao : misy mihitsy aza manambara zavatra tena mifanohitra tanteraka amin’ilay tondro zotra izay vao teo no ho eo no nankatoaviny. Mamp...
Fifidianana iray amin’ity taona ity
Ohatra ny tsy ho tafavoaka intsony mihitsy amin’ilay krizy nanomboka ny volana janoary 2009 isika. Betsaka ny nametra-pitokisana tamin’ny fanelanelanan’ny SADC izay nihitsoka noho ilay tondro zotra niniana natao hanalasala ary noho ireo filoham-pirenena tsy nivadika atidoha tamin’ny raharahan’i Madagasikara, porofon’izany ilay fihaonana an-tampony farany teo tany Luanda, ny 17 sy 18 aogositra. Ka hiraviravy tanana àry ve dia hionona, hiandry indray ny vahoaka hidina an-d...
Fandraisana anjara hivoahana krizy
Roa taona sy tapany izay no naharetan’ny tetezamita, nefa mbola tapi-dalan-kaleha ihany ny firenena. Ela izay fotoana nanantenana fa hitondra vahaolana mahomby izay ny « tondro zotra », hany hery anefa ankehitriny dia ny miaiky fa tsy ny rehetra intsony no mankasitraka azy. Etsy an-danin’izany, ny ataon’ny fitondram-panjakana dia mifangarika lozan-tany amin’ny fepetra takian’ny « fitondrana tsara tantana », izany hoe ny Fanjakana tan-dalàna, ny demokrasia, ny fandraisana...
Atsahatra ny savoritaka, ialana ny tetezamita
Ny mpanao politika dia mankamamy ny tantaran’ny tetezamita tsy mety hifarana, fa ny vahoaka kosa efa tofoka noho izy mpitazam-potsiny, nodisoim-panantenana sy natao an-jorom-bala. Fantatry ny rehetra ny fandehan-javatra : mbola tsy maina akory ny ranomainty nanoratana ilay tondro zotra efa fanimpiriny dia dedaka ery ny mpanararaotra hanangana governemanta lazaina fa iraisam-pirenena mifototra amin’ny famadihana palitao sy ny fanondrotan-tena, raha ny asa ho an’ny tombont...
Fiarahamonim-pirenena, fiarahamonina politika : misolo tena ahoana ?
Misy fanamarihana tsy maintsy atao. Hatramin’izay volana maro nodiavina nandritra ny fitondrana tetezamita izay dia naniry ohatra ny anana ny fanambarana sy ny fiandaniana nosoniavin’antoko politika maro na fikambanana sivily isan-karazany. Misy amin’ireny antoko na fikambanana ireny no vao niforona vao haingana ary tsy misy vahoaka manohana velively. Misy ny mamoaka fanambarana tsy misy sonia. Betsaka no tsy misolo tena na iza na iza ka tsy voatery akory hanefa na inona...
Arakaraka ny hoe be fahefana ianao na fadiranovana... 28/05/2011
Ny alahady 15 mey 2011 dia nilatsaka ilay vaovao hafahafa mikasika ny nisamborana ny talen’ny FMI voarohirohy ho nihetraketraka ara-pilan’ny nofo, ho nikasa hanolana ary hanidy olona aman-trano. Nametra-pialana tamin’ny asany i Dominique Strauss Kahn andro vitsivitsy taty aoriana, talohan’ny nanagiazan’ny fitsarana amerikana azy sy nahazoany fahafahana arahina fepetra mba hanomanany ny fitsarana azy. Tsara ho fantatra aloha fa ny asa maha talen’ny FMI azy, noho izy tsy t...
Ny 2011, fifidianana ahoana?
Hatry ny ela ny Filohan’ny FAT no efa namerimberina fa ho taom-pifidianana ny 2011. Tsy miandry afa-tsy izany ireo rehetra maniry ny hifaranan’ny krizy sy ity Tetezamita tsy misy fiafarany ity. Nefa misy olana tokony hodinihina mialoha an’izany, amin’izay i Madagasikara dia mba hahita marina fifidianana mangarahara sy mahaleo tena, satria ny fitsapankevi-bahoaka natao ny 17 novambra dia efa nampiseho fivoarana lehibe tamin’ny fanatanterahana fifidianana.
Aoka izay ny Tetezamita
Manomboka ity ny taona 2011, miditra amin’ny fahatelo taonany izao ny Tetezamita, dia indreo mbola eo daholo ny mpanao politikany mitady lalan-kivoahana tsy mety ho hita amin’ny krizy. Tsy ho tafahoatra loatra angamba ny fiheverana fa fanahy inian’ny mpanao politika kolokoloina ny tsy fifanarahany amin’izay izy afaka migoka tanteraka ny tombontsoa miavosa aterak’izao toejavatra izao ho an’ny maro be amin’izy ireo. Aiza ho aiza ny firenena sy ny rafi-pitondrana ary ny va...
Rehefa ataon'ny politika takalon'aina ny vahoaka
Tsy nisy dingana politika vita mihitsy na iray aza nandritra ny taona 2010. Mihalava ny Tetezamita ary tsy misy fiafarany ny vava ifanaovan’ny mpitondra politika nanora-tena ho miteny amin’ny anaran’ny vahoaka izay tsy nanome fahefana azy akory, misy antoko politika 200 eo ho eo izay tsy manana fandaharana asa sy tsy misy vahoaka manohana velively, ary misy fikambanana manora-tena ho mpanelanelana izay tsy...
Mpanao politika mibirioka, fiarahamonim-pirenena lasa fitaovana
Ny toe-javatra nitranga faramparany mikasika ny fitadiavana vahaolana amin’ny krizy diavin’ny firenena dia mahatonga ny mpanara-maso faran’izay malemy paika indrindra na ho sanganehana na ho tezitra. Tsy nahomby ny fifampidinihana tany Maputo, Addis-Abeba sy Pretoria, ka taorian’izany dia toa nisy lalam-baovao tany amin’ny vahaolana malagasy samy malagasy madiorano, notsinjovin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena lavitra fa am-pitandremana kosa.
Mbola momba ny fampiasana tsara ny volam-bahoaka foana ihany (Fizarana 2°)
II. Momba ny fanondranana tsy ara-dalàna ny vola any ivelany1
Toy ny firenena mahantra rehetra i Madagasikara dia mila vola ho an’ny fampandrosoana ka tsy maintsy mampiditra vola avy amin’ny fanjakana na tsy miankina amin’ny fanjakana avy any ivelany. Izany rahateo no voalaza fa tanjona kendrena amin’ny fanampiana ataon’ny fanjakana ho an’ny fampandrosoana. Mba fantatra àry ve anefa fa vola be tsy toko tsy firohana no mivoaka an’i Madagasikara na amin’ny fomb...
Mbola momba ny fampiasana tsara ny volam-bahoaka foana ihany (Fizarana 1°)
I – Momba ny raharaha goavana sasantsasany
Nandritra ny Repoblika nifandimby teto dia ny fampiasana tsara ny volam-bahoaka no fitaovana nentin’ny mpitondra handresen-dahatra antsika, ary miverimberina matetika amin’ny kabariny ny hoe hiaro ny fitondrana tsara tantana. Nefa, ny fitantanana ny volam-bahoaka dia mbola mijanona ho manjavozavo, rakotra fanodinkodinana, tsy fanarahan-dalàna satria mahalala olona, fandaingana amin’ny fandoavan-ketra, tsolotra, fivarotana...
O ry Madagasikara, nataonao inona ny 50 taona nahaleovanao tena ?
Fohy izany antsasa-tsiekla izany raha ny tantara no jerena. Tsy azo hadinoina anefa fa ny dimampolo taona farany dia tohin’ny fivoarana efa niainan’ny olona nanomboka tamin’ny taonjato fahadimin’izao vanim-potoana iainantsika izao. Efa ho taonjato roa izao no nankatoavan’izao tontolo izao an’i Madagasikara nandritra ny 75 taona noho ny fanjakana merina : ny fifanarahana nifanaovan-dRadama 1° tamin’i Angletera ny 23 oktobra 1817 dia niantso azy ho « Mpanjakan’i Madagasi...
Tafika, krizy politika ary demokrasia
Fanonganam-panjakana teny izy sa Kisarisary ? Fanangananan Fitantana – Miaramila na Komity Miaramila ho Fanavotam-pirenena ? Fanomezan’ny tafika fotoana farany hananganan’ny Tetezamita drafitra mazava sy mahatoky fa raha tsy izany ? Fananganana governemanta iarahan’ny sivily sy ny miaramila ? Nony farany, holavin’ny tafika ny fandraisana anjara amin’ny governemanta amin’ny maha tafika azy. Eto indray koa izany ny tafika dia tafiditra, asa na fidiny azy na tsia, amin’ny f...
Atsahatra ny fibiriokan'ny andro tsy fiasana
Sady gaga no talanjona ohatra ny olon-drehetra ihany ny SeFaFi raha nandre fa natao andro tsy fiasana nefa andraisan-karama ny andron’ny 14 mey, araka ny fanapahan-kevitra nambara indray andro mialoha.
Manana zo hahalala ny antony lehibe nandraisana io fepetra io ny olom-pirenena. Noho ny tsy fisian’ny antony mazava avy amin’ny fanjakana dia voatery ny tena hieritreritra fa fepetra natao hamalifaliana ny olona fotsiny iny mba hambaboana ny fony (demagozia).
Mitana ny teny nomena mba hanomanana ny hoavy
Andro iray talohan’ny 13 mey 2010, ny filohan’ny Tetezamita dia nanambara tamin’ny fomba ofisialy fa tsy ho kandidà izy amin’ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao. Nampibaribary zavatra maro ny akon’io fanambarana io. Samy nankato na nanameloka an’iny avy na ny mpanao politika isanisany, na ny mpikambana amin’ny fiarahamonim-pirenena, araka izay fandehan’ny fisainany tsirairay avy, lazaina iny fa fahakiviana, fandosirana andraikitra, tena fanapahan-kevitra tsy azo ...
Aoka izay ny tsy maty manota
Mora mirongatra kokoa ny tsaho mandritra ny tetezamita noho ny amin’ ny fotoana hafa, indrindra rehefa tsy mahay na tsy te hilaza ny vaovao ao anatin’ny mangarahara ny tompon’andraikitra. Mandrakariva, honohono tsy marina no aparitaky ny tsaho, disoiny ny vaovao, volavolainy ny saina homba ny heviny, na izy manaratsy. Nefa indraindray ny tsaho mba mety hanely vaovao marim-pototra ihany, indrindra raha tsy manamarina na mandiso azy ny manam-pahefana : fanondranana entana ...
Fifidianana tsy hisian'ny Fifampiahiahiana
Vitsy ny firenena izay ahitana fa isan’ny zavatra iainana tsotra eo anivon’ny fiarahamonina ny raharaham-pifidianana. Tsy tonga ho azy ny fitoniana aorian’ny fifanandrinana entanin’ny hafanam-po mandritry ny fifidianana. Vokatry ny fisedrana amin’ny raharaham-pifidianana sy kolontsaina amin’ny rafitra demokratika izay manaiky ny faharesena sy miarahaba ny mpandresy izany. Eto amin’ny firenena, izay tany malaza ho mpandala ny fihavanana anefa, dia mbola ny mifanasa van...
Fikorontanam-bahoaka sy fifanjevona politika
Inona no azo lazaina momba ny taona 2009 ? Eo am-piandrasana ny fitsaran’ny tantara, tsy hoe tsy mahasoa ny mitodi-doha indray amin’ny soridalan-kevitra maro namakivaky an’ity taona hafa kely ity, sy amin’ny lesona samihafa notsoahan’ny SeFaFi avy amin’izany, manaraka ny zotran’ny fanambarana maro navoakany. Mety ho ratsy ny fandraisan’ny olona ny fanambarana hevitra ampahibemaso amin’ny fotoana misy korontana...
Mivoaka amin'ny fihitsohana amin'ny kizo
Herintaona izay, ny fanakatonana an-tsitrapo ny Fahitalavitra VIVA an’i Andry Rajoelina nataon’ny fitondrana Marc Ravalomanana no nampipoaka ny krizy izay ny lalan-kivoahana dia tsy mitsahatra ny mihalavitra. Ny Malagasy ve dia voasazy ny tsy hifanaraka ?
Ho hita indray ny fanahy maha-olona1
Ireo volana maro nisian’ny fisalasalana sy ny herisetra ireo dia nampiseho fitondran-tena izay tsy ho azo ekena amin’ny vanim-potoana sasany sy amin’ny toerana sasany. I...
Ny tetezamita : fampahatsiahivana ireo tanjona tena izy
Taorian’ny fahavitana ny fifanarahan’i Maputo sy i Addis-Abeba, narahin’ny fampiharana feno fisalasalana eny fa na dia ireo nanao sonia azy aza no mampihatra azy, dia tonga ny fotoana hanatrarana ireo tanjona izay napetraky ny mpitondra ny tetezamita hanamarinany, eo imason’ny firenena sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena, ny fakana ny fahefana. Manoloana ny fivarinana misy ankehitriny noho ny filalaovana politika, tena ilaina ny mampahatsiahy ny sasantsasany amin’ireo l...
Fitsarana inona ho an'ny ankehitriny sy ny ho avy ?
Ireo Fivoriam-pirenena farany momba ny Fitsarana sy ny filazana vao haingana nataon’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara (SMM) dia namoha ny adihevitra momba ny fahaleovantenan’ny Fitsarana sy ny mpitsara. Amin’ny fahitana ny fomba fanao hatramin’ny fahaleovantena no ho mankaty, ny mpitsara dia mitaky misimisy kokoa fahaleovantena.
Ny fahaleovantenan’ny Fitsarana sy ny mpitsara dia misoratra mandrakariva ao anatin’ny Lalàmpanorenan’ny Repoblika telo nifandimby sa...
Ny firaisamonin'ny olompirenena sy ny antso fanairana ny anjara asany
Ny kirizin’ny taona 2009 dia nampivohitra ny fatiantoka mahavoa ny tontolo politika malagasy izay indraindray mahatsikaiky sy mampihomehy ary indraindray mampangoraka sy mampahonena. Ny teti-dratsy sy ny fifandrafesana, nahazo laka teo amin’ny fampitam-baovao nandritra ny volana maro, no nampibaribary fa ny mpikambana ao amin’ny fiarahamonina politika dia tsy misahana afa-tsy ny fiarovana ny toerana tsara karama na mikatsaka hahazo an’izany. Tsy misy fiahiana ny soa iomb...
Tsy miova ny tanjona
Naharitra telo volana ny korontana ary nitoetra efa-bolana ny ahiahy, manoloana izany dia maika ny ijerentsika mbý aiza ho aiza isika izao ary ahoana ny fomba hirosoana.
Tsy feno ny fahefana
Ny 17 marsa lasa teo, dia nafoin’i Marc Ravalomanana ho an’ny Fitondrana Miaramila ny fahefany, izay tsy voalaza tao anaty Lalampanorenana. Neken’i Andry Rajoelina io fahefana avy amin’ny Fitondrana Miaramila io, taorian’ny fankatoavan’ny Fitsarana Avon’ny Lalampanorena...